Sheekh Shariif oo maanta kusoo wajahan magaalada Muqdisho iyo sida ay xaaladdu tahay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Sheekh Shariif oo maanta kusoo wajahan magaalada Muqdisho iyo sida ay xaaladdu tahay
Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya uu soo gaaro madaxweynihii hore ee dowladdii KMG aheyd ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, isagoona kadib ku dhawaaqi doonno ololihiisa doorasho ee xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Magaalada Muqdisho ayaa haatan waxaa ka socota qaban-qaabadii ugu dambeysay ee lagu soo dhaweynayo Sheekh Shariif Sheekh Axmed, waxaana habeenkii xalay ilaa saakay magaalada laga dareemayaa is-bedel aan caadi ahayn, iyadoona wadooyinka lagu dhajiyay sawirrada Sheekh Shariif oo aad u waaweyn.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa la sheegay in loo diyaariyay guri aad u weyn oo ku yaala magaalada Muqdisho, iyadoo sidoo kale ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaali ah ay ammaankiisa la wareegi doonaan, kadib markii uu magaalada yimaado.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ah musharaxa kaliya ee sida aadka ah loo hadal haayo inuu Xasan Sheekh Maxamuud ciriiri gelin karo, waxaana sidoo kale kacsan taageerayaasha Sheekh Shariif, kadib marki maamulka garoonka diyaaradaha uu habeenkii xalay soo saaray amar saxifiyiinta looga mamnuucayo inay soo galaan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Dhinaca kale, Sheekh Shariif ayaa markii uu yimaado magaalada Muqdisho kadib waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqi doonaa inuu yahay musharax u taagan doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, xilli loolanka doorashada madaxweynaha uu aad usii adkaanayo.
Xaaladda magaalada Muqdisho ayaa maanta ah mid degan, waxaana hadal-heynta ugu weyn ay tahay waxa isku soo beegay amarka saxafiyiinta looga mamnuucay inay galaan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho iyo imaanshiyaha Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Dadka odorosa siyaasadda Soomaaliya ayaa arrinkaasi ku sheegay mid halis keeni karta, islamarkaana uu madaxweyne Xasan Sheekh ku caburinaayo ololaha doorasho ee musharixiinta kale ee kula tartameeysa doorashada sanadkaan dhici doonta 2016-ka.
Ugu dambeyntii, waxaa maalmaha soo socda sidoo kale magaalada Muqdisho kusoo wajahan musharixiin kale oo uu ka mid yahay ra’iisul wasaarihii hore ee dowladii KMG ahayd ee Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo iyo musharaxiinta kale oo haatan ku maqan dalka dibadiisa, waxayna markii ay soo gaaraan magaalada ay bilaabi doonaan ololahooda doorashada ee dalka.